काठमाडौं, वैशाख ३ – पाँचौ ‘जुनियर ब्याटर–२०१७’ शुक्रबार छानिएका छन् । उमेर समुह अनुसार ‘जुनियर ब्याटर एन्जलस्’ (कक्षा १ र २), ‘जुनियर ब्याटर प्रिन्स एन्ड प्रिसेज’ (कक्षा २ र ४) र ‘जुनियर ब्याटर किङ एण्ड क्विन’ (कक्षा ५ देखि ८ सम्म) गरि तीन क्याटवरीमा आयोजना गरिएको प्रतियोगीतामा तीन शिर्ष बिजेता छानिएका हुन् । कार्यक्रममा ‘जुनियर..
फिल्म समिक्षाः यसकारण हेर्नुहोस् ‘ए’ सर्टिफिकेट पाएको बिद्याको ‘बेगम जान’
फिल्मः ‘बेगम जान’ पाठकको रेटिङः २.५/५ कलाकारः विद्या बालन, नसिरुद्दीन शाह, रजत क..
ज्योति र रियाले तताए युएई
युएई, बैशाख ३–नयाँ बर्ष २०७४ सालको अबसर पारेर युएईमा २ वटा धमाकेधार कार्यक्रमहरु..
बिमलको सपना बन्यो बिपना : उनी भन्छन्-‘किन तिम्रै याद आउँछ छिन छिन?’ (भिडियो)
काठमाडौं – विगत केही बर्षदेखि नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा अनुभव सँगाल्दै आका ब..
प्रेमध्वज प्रधानदेखि योगेश बैद्यको गीत एउटै एल्बममा
काठमाडौं, बैशाख २– नववर्ष २०७४ को अवसर पारेर गीतकार डा.राजुबाबु श्रेष्ठ र संगीतक..
मृत्यु हुँदा गर्भवती थिइन् यी नायिका, परिवारले शवसमेत पाएनन्
एजेन्सी बैशाख २ – सन् १९९९ मा रिलिज भएको फिल्म सूर्यवंशम फ्लप भएको थियो तर अहिले सबैभन्दा चर्चित फिल्म मध्येको एक हो । एक फिल्मी च्यानलमा हरेक दुई तीन दिनमा यो फिल्मलाई देखाइएको हुन्छ । फिल्ममा अमिताभ बच्चनको अपोजिटमा साउथ इन्डियन फिल्मकी नायिका सौन्दर्या रघु देखिएकी थिइन् । फिल्म रिलिज भएको पाँच वर्षपछि सौन्दर्याको मृत्यु [&hel..
बाथटबमा यी नायिकाले यसरी देखाइन् ‘बेबी बम्प’, ६ महिना पहिले भएको थियो विवाह
एजेन्सी बैशाख २ – नायिका लिजा हेडन गर्भवती छिन् । उनले केही समय अघि आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा फोटो सेयर गरिन् जसमा उनी बाथटबमा सुतिरहेको अवस्थामा ‘बेबी बम्प’ देखाउँदै म्यागजिन पढिरहेको देख्न सकिन्छ । लिजा गर्भवती भएको तीन महिनाभन्दा बढि भइसकेको छ । लिजा धेरैजसो आफ्नो इन्स्टाग्राममा कहिले साथीको त कहिले श्रीमान डिनोसँग मस्ती गरिर..
एजेन्सी बैशाख २ – कपिलले सुनिल ग्रोवरलाई ट्वीटरमा अनफलो गरेका छन् । उनले सुनिललाई मात्र नभई कार्यक्रममा ‘नानी’ बन्ने असगर अली र चन्दन प्रभाकरलाई पनि अनफलो गरेका छन् । वास्तवमा कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोवरबिच भएको झगडापछि सुनिलले ‘द कपिल शर्मा शो’ मा आउनका लागि अस्विकार गरेका थिए । सुनिलको समर्थनका कार्यक्रमका अन्य स्टार पनि [&helli..
पूर्व श्रीमानले गरे विवाह, के अब दोस्रोपटक बेहुली बन्नेछिन् करिश्मा कपूर ?
एजेन्सी बैशाख २ – करिष्मा कपूर (४२) का पूर्व श्रीमान संजय कपूरले केही समय अघि प्रिया सचदेवा (४१) सँग विवाह गरेका छन् । संजय पछि अब करिष्माका प्रेमी संदीप तोसनीवाल (४२) की श्रीमती डाक्टर आश्रिता उनीसँग सम्बन्धविच्छेदको लागि तयार भएको खबर सार्वजनिक हुन थालेको छ । यस्तोमा अब चाँडै नै करिष्मा– संदीप चाँडै नै आफ्नो […]
चलचित्र समीक्षा : माया गर्न सिकाउने ‘लभ लभ लभ’
कुबेर गिरी काठमाडौँ, वैशाख २ – युवा पुस्तालाई लक्षित गरी टिनएजर युवायुवती बीचको माया प्रेमलाई पर्दामा उतार्ने प्रतिस्पर्धा छ, यतिखेर चलचित्र क्षेत्रमा । यिनैमध्येको चलचित्र हो– ‘लभ लभ लभ’ । थुपै सफल चलचित्र दिएर निर्देशनमा अलग पहिचान बनाएका दीपेन्द्र के खनालको लेखन तथा निर्देशन रहेको यस चलचित्रबाट दर्शकले ‘हाइ एक्स्पेक्टेसन’ गर्..
झमक बहादुर बन्ने भए अनुप
काठमाडौँ, बैशाख २ – नेपालीपनको झल्को दिने चलचित्र ‘झमक बहादुर’को निर्माण हुने भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चलचित्र निर्माण घोषणा भयो । नेपाली समाजमा अझै पनि विकृतिका रुपमा रहेको धनी र गरिब बीचको द्धन्द्धलाई कथा बनाएको यो चलचित्र यूबी फिल्मस् ग्यालरीले निर्माण गर्न लागेको हो । अनुप बिक्रम शाही, मीन बहादुर ताम..
मलेसियामा सनसनी मच्चाउने रियाले युएईमा के गरिन् यस्तो ! (हेर्नुस् ५ तस्बिर)
युएई, बैशाख २–नेपाली हट तथा आइटम डान्सर भनेर चिनिने नृत्याङ्गना रिया श्रेष्ठले युएईमा दर्शकहरुको वाही वाही पाइन् । काभ्रे सेवा समाज युएईले आयोजना गरेको नेपाली नयाँ बर्ष बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रममा उनले ३ ओटा नृत्य गरिन् । दर्शकको चाहना अनुसार आफुलाई प्रस्तुत गर्ने कुरा बताउने उनले युएईका दर्शकलाई पनि मादकता प्रदर्शन गरेर मनोरञ्ज..
यस्तो आयो सायद २ को ट्रेलर
काठमाडौं, बैशाख १ – चलचित्र ‘सायद २’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नयाँ बर्षको अवसर पारेर बिहिबार साँझ आयोजित ‘न्यु ईयर ईभ( म्युजिकल नाईट’ कार्यक्रममा चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा चलचित्रका कलाकार र निर्माण पक्षले ट्रेलर सार्वजनिक गरे । चलचित्रमा शुशिल श्रेष्ठ, निशा कार्की, स्यारोन श्रेष्ठ, अमृत ढुङ्गाना, कुश..
काठमाडौं, बैशाख १ –मदन घिमिरेको निर्देशनमा चलचित्र ‘काउसो’ निर्माण हुने भएको छ । शुक्रबार राजधानीको रातोपुल स्थित रक हाउस क्याफेमा आयोजित एक कार्यक्रममा चलचित्रको शुभ–मुर्हत गरिएको छ । बिभिन्न क्षेत्रका ब्याक्तिहरु उपस्थित रहेको कार्यक्रममा कलाकार सविन श्रेष्ठ, पुष्कर राउत, सुरेन्द्र चापागाई, अनु पराजुली लगायतका कलाकारले चलचित्र..
खोजे जस्तो नभेटेर होला प्रस्ताव स्वीकार्न सकेकी छैन : गायिका भूमिका गिरी
पछिल्लो समयकी चर्चित गायिका हुन्– भूमिका गिरी । स्टेज क्विनका नामले समेत परिचय बनाएकी यी सुन्दरी दाङमा जन्मेर काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाउँदै आएकी छन् । बाल्यकालदेखि नै कलाकारिता क्षेत्रप्रति झुकाव राख्दै आएकी उनको लोक गायनमा एउटा छुट्टै परिचय बनेको छ । लोकगीत गाएर देशविदेश समेत घुम्न सफल गिरीलाई रातोपाटीका १० प्रश्नः तपाईं त गायिका..
छोरालाई निर्देशकले भने ‘तेस्रोलिङ्गी’, ज्याकी श्रोफकी श्रीमतीले दिइन् यस्तो जवाफ
एजेन्सी बैशाख १ – राम गोपाल वर्माको एउटा भिडियो सोसल मिडियामा केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो जसमा रक्सीको मातमा उनी टाइगर श्रोफलाई तेस्रोलिङ्गी र सबैभन्दा सुन्दर महिला बताएका छन् । टाइगरमाथि भएको यस्तो कमेन्टमा उनकी आमा आएशा श्रोफले कडा प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । एक मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा आएशाले भनिन्, ‘जब क्याराभान अगाड..
नयाँ बर्षमा दर्शकलाई तीन चलचित्र ‘घामपानी’, ‘लभ लभ लभ’ र ‘राधे’
काठमाडौं, बैशाख १ –नयाँ बर्षको अवसर पारेर आज शुक्रबारबाट देशभर एकसाथ तीन चलचित्र ‘घामपानी’, ‘लभ लभ लभ’ र ‘राधे’ प्रदर्शनमा आए । नयाँ बर्षको सुरुवातको दिन ब्यवसायका लागि उपयुक्त मानिदै आएकोले पनि तीन चलचित्र तछाड मछाड गर्दै प्रदर्शनमा आएका हुन् । यी तीन चलचित्र नै निर्माणका हिसावले बलिया मानिएका छन् । ‘घामपानी’ रंगपत्रकार तथा समि..
आफ्नो पासपोर्टको फोटो मनपर्दैन ? हेर्नुहोस् ऐश्वर्या, शाहरुख र सन्नी लियोनका पासपोर्ट फोटो
एजेन्सी बैशाख १ – के तपाईंलाई आफ्नो पासपोर्टको फोटो मनपर्दैन । पासपोर्ट फोटो खिच्दा महिलाले केही मेकअप गर्न नहुने र पुरुषले पनि आफ्नो अनुहारमा केही फेरबदल गर्न नहुने भएकाले धेरैलाई पासपोर्टको फोटो मन नपर्न सक्छ । आज हामी तपाईंलाई बलिउड सेलिब्रिटीका पासपोर्टका फोटो देखाउँदैछौं । हेरौं
बालिका बनिन् मिसेस क्विन नेपाल
काठमाडौं, बैशाख १ –‘मिसेस क्विन नेपाल–२०१७’को उपाधि काठमाडौं २४ की फेशन डिजाईनर बालिका अधिकारीले चुमेकी छिन् । १६ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पर्दै उनले उपाधि चुमेकी हुन् । इभेन्ट बेटर ग्यालेक्सीले नयाँ वर्षको अबसर पारेर बिहिबार अबेरसाँझ राजधानीमा आयोजना गरेको सो प्रतियोगितामा अधिकारीले क्राउन, हिरोको स्कुटर सहित विभिन्न उपहार प्राप्त ग..
छोरी भन्दा आमा तरुनी (भिडियो)
काठमाडौं – चर्चित लोक गायक कुमार बस्नेतको बहुचर्चित लोक गीत छोरीभन्दा आमा तरुनीको कभर भर्सन सार्वजनिक भएको छ । युवा गायक तथा संगितकार अनिश श्रेष्ठले उक्त गीत गाएका हुन् । गीतको भिडियो समेत निर्माण गरिएको छ । पुराना लोक तथा मौलिकपन बोकेका गीत र सर्जकको सम्मानस्वरुप यस गीत सार्वजिनक गरेको अनिशले बताए । वास्तविक गीतमा भने कुम..
प्रस्तुतिकरण नै मेरो चलचित्रको मुख्य आकर्षणः निर्देशक दीपेन्द्र
‘चलचित्रको जमेर समिक्षा गर्छ । त्यसले चलचित्र त बनाओस् । हामी पनि हेरौला ।’ धेरैको पत्रकार दीपेन्द्र लामाको बिषयमा भनेका शब्द हुन् यी । समिक्षाकै कारणले उनलाई फोनबाट, भेटेर र साथीभाइको माध्यमबाट धम्क्याउने त कति छन् कति । यी लगायत सबै चलचित्रकर्मीको प्रतिक्षा आजबाट सकिँदैछ । अर्थात दीपेन्द्रले बनाएको चलचित्र ‘घामपानी’ शुक्रबारबा..
हरिवंशदेखि रक्षासम्म : यस्ता छन् सेलिब्रिटीका नयाँ वर्षका योजना
नयाँ वर्ष २०७४ को रौनकले यतिबेला देशभर छोएको छ । नयाँ बर्ष आगमनको रौनकसँगै हरेक ब्यक्तिले बिगतका कामको समिक्षा गर्दै नयाँ बर्षमा गरिने कार्यका योजना बनाउन थालेका छन् । बिगतलाई मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ बर्षका लागि बनाइने योजना कलाकारका पनि महत्वपूर्ण नै हुने गर्दछन् । यो बर्ष यस्तो गर्छु, यस्तो गर्दिन । यस्तो बनाउंछु । यस्तो [&helli..
नेपालका ख्याती प्राप्त कलाकारहरु कतारमा
दोहा, चैत ३१ – नेपालका ख्याती प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कलाकार तथा गायक गायिकाहरु कतारमा आएका छन् । उनीहरु बसन्त फिल्मस् प्रा.लिले भोलि शुक्रबार गर्ने लागेको नेपाली नयाँ बर्ष २०७४ उपलक्ष्यमा शुभकामना आदानप्रदान सहित बिबिध सास्कृतिक कार्यक्रममा सहभागि हुन कतार प्रवेश गरेका हुन् । कतारको गल्फ प्याराडाईज होटेलको हलमा हुने..
अन द फ्लोरमा यस्ता परिरनमा सजिए मोडल
काठमाडौं, चैत ३१ – साँझ पर्दैजाँदा होटल सोल्टी क्राउन प्लाजाको सभाहल फेसनमय बन्दैथियो, जहाँ डेढ दर्जन भन्दा बढी व्यवसायिक मोडलहरु ‘परी’ रुप धारणमा स्टेज नाप्ने तयारी गर्दैथिए । झमक्क साँझले छोपेसँगै म्युजिकको तालमा स्टेजमा उत्रिएका मोडलहरुले मंगलबार एकाएक माहोल तताए । प्रशंग ‘एञ्जल अन द फ्लार’ नामक फेसन शोको हो । आरएनआर गु्रपले ..
ब्ल्याक डायरीमा भुवनको सस्पेन्स न्युज
काठमाडौं, चैत ३१ – अभिनेता भुवन केसी सस्पेन्स भुमिकामा देखिने भएका छन् । २२ बैशाखबाट प्रदर्शनमा आउँने चलचित्र ‘ब्ल्याक डायरी’मा उनी सस्पेन्स भुमिकामा देखिन लागेका हुन् । अहिले बजारमा आएका भन्दा फरक बिषयबस्तुमा चलचित्र निर्माण भएको दाबी निर्माण पक्षले गर्दै आएको छ । युवाहरुको कथामा आधारित रहेर निर्माण गरिएको यस चलचित्रमा दर्शकहरु..